ခကျြခကျြပရဒိသု | ဧရာမ, ဧရာတောင်တန်း, ခကျြပရဒိသု
ခကျြခကျြပရဒိသု (ဂျာမန်Böhmisches Paradis) ကသဘာဝနှင့်သမိုင်းအထိမ်းအမှတ၏မြင့်မားသောအာရုံစူးစိုက်မှုရှိပြီးသောအလယ်တန်းPojizeříအတွက်ဧရိယာများအတွက်နာမည်ဖြစ်ပါတယ်။ ခကျြခကျြပရဒိသုဧရိယာမူလက (ယခုဘိုဟီးမီးယား၏ဥယျာဉ်ကိုခေါ်) Litomerice လူနေထူထပ်ဂျာမန်စကားပြောလူဦးရေဖော်ပြခဲ့သည်။ လက်ရှိချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်2အတွက်ဝေါဟာရဖြစ်ပါတယ်။ 19 ထက်ဝက်။ ရာစု။ စာရေးသူမကြာခဏ spa Sedmihorky, ပထမဦးဆုံးမှတ်တမ်းတင်အသုံးပြုမှုကိုသွားရောက်ကြည့်ရှုသောသူသည် spa ဧည့်သည်များအဖြစ်ကိုးကားနေကြသကဲ့သို့, သို့သော်အယ်ဒီတာ 1886 ၏ Vaclav Durych ကနေလာပါတယ်။
Sobotka, Mnichovo Hradiště, Sychrov, Frýdštejn, Zelezny Brod, Semily, Lomnice nad Popelkou, မီးရထားနှင့် Jicin: အရှေ့မြောက်ဘက်ပရာ့ဂ်၏ 90 ကီလိုမီတာအကြောင်းကိုလဲလျောင်းနယ်မြေတွေကိုခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်၏မြို့ရွာအားဖြင့်ကာရံထားခြင်းခံရသည်။ အဆိုပါ "ဟုအဆိုပါ Bohemian ပရဒိသု၏နှလုံး" အစဉ်အလာလည်ပတ်ငွေကြေးကြောင့်စဉ်းစားသည်။ ဒေသ၏တောငျကိုKozákovနှင့် Trosky ရဲတိုက်အပျက်အယွင်း၏အဓိကအထင်ကရအဆောက်အ။ သိသာထင်ရှားသောလည်းရော့ခ်မြို့, အထူးသဖြင့်Prachovskéကျောက်ဆောင်များမှာဥပမာအားဖြင့်, Příhrazské, Hruboskalsko နှင့်ကန် rocks ။ Žabakor, Komárovskýရေကန်နှင့်ရေကန်podtroseckýchpodkosteckýchနှင့်ချိုင့်၌တည်၏။
ခကျြခကျြပရဒိသုသည့်စိတ်ကူးယဉ်ခရီးသွားဒေသခကျြပရဒိသုပိုကြီးတဲ့ဧရိယာအတွင်းမှာသာသုံးသေးငယ် discrete ဒေသများပါဝင်သည်ရာ 1955, ကတည်းကရှိပြီးသားလည်းတစ်ဦးကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရှုခင်းဧရိယာ၏နာမတော်သည်။
Maloskalsko သဘာဝတရား Park ကတစ်စိတ်တစ်ပိုင်း PLA အခကျြပရဒိသု, Jablonec nad Nisou Liberec ချက်ဒေသ၏အနောက်တောင်ပိုင်းနယ်စပ်ခရိုင်မှာတည်ရှိသည်ဖြစ်သော 1997 အတွက်ကြေငြာနေတဲ့ကာကွယ်ထားဧရိယာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာထူးထူးဆန်းဆန်းကျောက်ဖွဲ့စည်းမှု၏အပြည့်အဝစိမ်းလန်းစိုပြေတဲ့ကျေးလက်နေရခြင်း, အ Jizera မြစ်နှစ်ဦးစလုံးဘဏ်များတွင်တည်ရှိသည်။ စိတ်ကူးယဉ်စင်တာ, ပန်းခြံအမည်ရှိသောအရသိရသည် Mala Skala များ၏ရွာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီသဘာဝကပန်းခြံကြေညာရန်ရည်ရွယ်ချက်အတွက်မြူနီစီပယ် Little ကကျောက်ထရံ, Koberovy, Frýdštejn, Líšnýနှင့်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းPěnčínနှင့် Zelezny Brod အတွက်ခကျြပရဒိသု၏ protected ဧရိယာကိုချဲ့ထွင်ရန်အချိန်ကြာမြင့်စွာအချည်းနှီးကြိုးစားအားထုတ်မှုကနေရလဒ်။
Osu ဒီဧရိယာမြစ် Jizera ပါဝင်ပါသည်။ ရွှတ်-kozákovခေါင် - သံလည်ပတ်ငွေကြေးကြောင့် Brod ကနေဒုတိယဝင်ရိုးPojizeříဖြတ်သောမြစ်ရေချိုင့်၌နက်ရှိုင်းစွာဖြတ် meanders ရန်။ တန်ဖိုးအရှိဆုံးက်ဘ်ဆိုက်များခညျြနှောငျဤအစိတျအပိုငျးတွင်, အရာအချို့အစိတ်အပိုင်းများပြီးသားကာကွယ်ထားဒေသများနှင့်အရေးကြီးသောရှုခင်းဒြပ်စင်များ၏ကွန်ယက်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာကြပါပြီ။ NPP အပူပိုင်းကျောက်, သြစတြီးယားများအတွက်Bučiny PR စနစ်, PP Ondříkovický pseudokarst စနစ်။ ကျေးရွာများနှင့်တည်း၏အကွိမျမြားစှာဖှံ့ဖွိုးတိုးဒီဧရိယာ၏ပုံမှန်ဇာတ်ကောင်ပြီးဆုံး။
သဲကျောက်ကျောက်ဆောင်ကဖွဲ့စည်းVranovskýဖြီးနဲ့ခြောက်သွေ့တဲ့ကျောက်ဆောင်ကြီးစိုးသောနယ်မြေ၏ထိပ်တန်းအစိတ်အပိုင်းတစ်ခု။ Jizery ကျဲပါးအသီးအရွက်များနှင့်အတူကဖို့ပိုမိုကျယ်ပြန်ဒေသများရှိဖုံးလွှမ်းသဘာဝပန်းခြံ levees ၏အစိတ်အပိုင်းလည်းမြောက်မြားစွာမြေပြိုမှုများနှင့်စောင်းနှင့်အတူမြစ်နှင့်မတ်စောက်သောတောင်စောင်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုပါဝင်ပါသည် wold ။ Jizera နိမ့်သောကုန်းပြင်မြင့်မှတောင်ကြီးတောင်ငယ်တောင်ခြေစက်ရုံမျိုးစိတ်ဆင်းများအတွက်ပြွန်အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်။ မြစ် thermophilic သစ်ပင်ပန်းမန်တစ်လျှောက်ဆန့်ကျင်ဘက်ဦးတည်တောင်ပေါ်သို့ပြန့်နှံ့။
ဒီဧရိယာအတွက်ပုံမှန်မူရင်းသစ်တောဂေဟစနစ်၏ Beech သစ်တောများ, acidophilous ထင်းရှူးနှင့်ထင်းရှူး-ပိတ်ပင်သစ်တောများကိုယ်စားပြုနေကြသည်။ သိသာထင်ရှားသော nonforest ဂေဟစနစ် Zaborci မှ waterlogged Meadows, ဟောင်းတစ်ဦးသဲကျောက်ကျောက်မိုင်း, ချိုင့် Stream နှင့်Vazoveckého site ကိုရွှေဝါရောင်bělokvětéhoပါဝင်သည်။
အလွန်မတူညီဘူမိဗေဒဆိုင်ရာအလွှာပေးထားသောလူမှုအသိုင်းအဝိုင်းများနှင့်သူတို့ကခဲလက်လှမ်းက်ဘ်ဆိုက်များ (Beech သစ်တောများ, ထင်းရှူး-ပိတ်ပင်ရော့ခ်ချိတ်, waterlogged Meadows, စမ်း, etc) မှာထိန်းသိမ်းထား relict ဒြပ်စင်နှင့်မူရင်းအသီးအရွက်များ၏အကြွင်းအကျန်များကိုဖယ်ရှားထားတဲ့အတွက်မျိုးစိတ်များ၏ကြိုးစားအားထုတ်မှုများအမျိုးမျိုးŽeleznýMaloskalsko.¨နှင့်ကပ်လျက်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ။ ဒီနေရာမှာဥပမာ, ရွှေဝါရောင် tuberose, trigeminal အစောပိုင်းသန္တာ, polystichum lonchitis, ဖိနပ်, Helleborine အနီ, အဖြူ helleborine သစ်ခွများနှင့်သစ်ခွကြီးထွားလာအရေးကြီးသောစက်ရုံမျိုးစိတ်တွေထဲမှာ။ သဲကျောက်ကျောက်ဖွဲ့စည်းမှုဟာအသင့်လျော်ပတ်ဝန်းကျင်အများအပြားအရေးကြီးသောငှက်မျိုးစိတ်သည်။ သူတို့ကဒီနေရာမှာ Swallowtail, ကလေးငယ်သက်တံ့, ပုတ်သင်, ဘားပြုပ်, ပုတ်သင်ညိုတစ်ကောင်, slowworm နှင့်ပိုပြီးနေထိုင်ကြသည်။
Klokočské Nature Reserve EV Rocks ။ အဘယ်သူမျှမ။ Jičínskáတောင်ကုန်း, ခရိုင်အတွင်းရှိခရိုင် Semily Klokočíအတွက်ရွာ၏အနောက်ဘက်တွင် 918 ။ Liberec ချက်ဒေသဆိုင်ရာရုံးခွဲများ - ဧရိယာ ANCLP စီမံခန့်ခွဲ။ သဘာဝတရားအရံသြစတြီးယားနဲ့ခကျြပရဒိသု Geopark အားဖြင့်ဥရောပအရေးပါမှုအောင်မြင်မှုများ Jizery ၏က်ဘ်ဆိုက်များ, ခကျြပရဒိသု၏ protected ဧရိယာ၌တည်ရှိသည်။
kuesty ရဲ့အစွန်းမှာရော့ခ်မြို့ဖွဲ့စည်းKlokočskéကျောက်ဆောင်အနောက်တောင်ဘက်နှစ်, Coniacian ဖို့အထက် Turonian ၏လင်းကျောက်မှာသဲနှစ်ထပ်။ အမြင့်ဆုံးအမှတ် (458 မီတာ) ကိုတက်ဖွဲ့စည်းပုံdenudačnímအရှေ့တွင်တည်ရှိသည်။ အလယ်ပိုင်းနှင့်အနောက်မြောက်ပိုင်းအစိတ်အပိုင်းအတွက် Kuesty အနည်းငယ်အခြေခံအဆောက်အဦးမြင့်တက်နေတဲ့မတ်စောက်သောတောင်စောင်းပေါ်တွင်sufozníမြောက်မြားစွာတွင်းပေါက်ကြီးအပိုင်းသုံးပိုင်းအစွမ်းထက်မြေထုဆွဲအားodsedáníúpatnímiလိပ်ခေါင်းအဖြစ်ပုံစံမျိုးစုံနှင့်အတူတာဝါတိုင်, ကော်လံနှင့်ရော့ခ်နံရံများထလေ၏။ ဒေသအလိုက်ရော့ခ် niche, ကြားဖြတ်ဂူ (သူတို့ထဲကအတော်များများရှေးဟောင်းသုတေသနလည်းသိသိသာသာရှိပါတယ်) နှင့်မှိုကျောက်ဆောင်ဝေါဟာရဖြစ်ပါတယ်။ ကျောက်ဆောင်တစ်ခါတစ်ရံဘုစပတ်သစ်သားနှင့်အတူ, အဓိကအားဖြင့်ထင်းရှူးတောဖြစ်ကြသည်။ အရှေ့တောင်ခုနှစ်တွင်ကျောက်ရဲတိုက်Rotštejn၏ပျက်စီးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ တက်ပြီးတ္ထုရှိပါသည်။ လိုင်းရော့ခ်ကျန်ကြွင်းသောအရပ်ကနေမြောက်ပိုင်းတောင်များ Rovno ထွန်တလွှားကဘ-SE ဝေးကွာသောအမြင်များ oriented ။
Kozákov (744 မီတာ) အမြင့်ဆုံးသောတောင်ပေါ်kozákovskýခေါင်နှင့် Bohemian ပရဒိသုဖြစ်ပါသည်။ ဟေးလ်သမိုင်းမမုဆိုးရိုးရှင်းသော tools တွေကိုထုတ်လုပ်ထားတဲ့၏, ကျောက်၏သိုက်အဖြစ်သမိုင်းမခေတ်ကတည်းကဆည်းကပ်လျက်ရှိသည်။ ကျောက်ဆောင်များ၏အခေါင်းပေါက်ထဲမှာအလင်းဆုံ Filler agate, နဂါး, နီလာခရမ်းရောင်, ကျောက်သလင်း, smoky လင်းကျောက်များနှင့်အခြားအဖိုးတန်ကျောက်များ crystallized ။ ဒေသခံ site ကိုဘုရားကျောင်းကိုအလှဆင်ဖို့အလယ်ခေတ်တွင်အသုံးပြုခဲ့သည်။ Kozákovလည်းလေထီးစီးခြင်းများအတွက်ရေပန်းစားနေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
နယ်မြေKozákova၏အကြီးဆုံးအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုတက္ကသိုလ် basalt နဲ့မီးတောင်သိုက်ဖြင့်ဖုံးလွှမ်းမြောက်ဘက်နှင့်အရှေ့သှနျးလောငျး၏ထိပ်ပေါ်မှာနေသော Palaeozoic ကျောက်ဆောင်များ၏ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။6သန်းလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း4မှခင်မှာတက်ကြွမီးတောင်Kozákovဖြစ်လေ့ရှိတယ်။ အနောက်ဘက်အခြမ်းKozákovaအဓိကအားမီဆိုဇိုးရစ်သည် Cretaceous Cenomanian မှာသဲပါဝင်ပါသည်။ ဤရွေ့ကားအများအပြားတက္ကသိုလ် ker သို့တက်ကျိုးပဲ့နှင့်၎င်း၏လက်ရှိပုံစံသို့ရုတ်သိမ်းခံခဲ့ရသည်။
ဒါဟာချော်ရည်အပေါ်အထက်နှင့်အောက်ပိုင်းအလယ်အလတ်အရှေ့ပိုင်းတောင်စောင်း (15-20 °) နှင့်အပြားအထွတ်အထိပ်ဝေမျှ၏ (melafyrového) သည်တောင်ဘက်အရှေ့မှနောက်ကျောကိုဆင်းပြေးပြီးနောက်, Neogene အုပ်စု olivine basalt (basalt) စီးဆင်းantiklinálníhobazaltandezitovéhoအများဆုံးမြင့်မားအတွက်ကျယ်ပြန့်အချိုးမညီမြင့်သည်။ မြင့်မားခြင်းနှင့်ကမ်းပါးမတ်အနောက်ပိုင်းဆင်ခြေလျှောမှာနယ်နိမိတ်မြို့ရိုး, ရော့ခ်တာဝါတိုင်, niche, ဂူ, úpatnímiကျောက်သားလိပ်ခေါင်းနှင့်အတူသဲကျောက် (max ကို။ 667 မီတာ) ၏ချက်မှာမဟာလုပ်ကွက်မီးမောင်းထိုးပြနေကြသည်။ melaphyre နှင့် basalt တောင်စောင်းတွင်ကျောက်ပင်လယ်ရေစီးကြောင်းများနှင့်ဖုံးလွှမ်းလျက်ရှိသည်။
သိကျယ်ပြန့်ကျောက်မိုင်း၏အနောက်တောင်ဘက်ဆင်ခြေလျှောတွင် Votrubec ကျောက်မိုင်း melaphyre ။ ဒါဟာပုဂ္ဂလိကပိုင် p ။ Votrubec ဖြစ်ပါတယ်, ကျောက်မြတ်၏သေးငယ်တဲ့ပြတိုက်လည်းပါဝင်သည်။ သေးငယ်တဲ့အခကြေးငွေများအတွက်ပိုင်ရှင်ထို့နောက်ကြိတ်ဆုံနှင့်ကြိတ်စေခြင်းငှါအရာအဖိုးတန်ကျောက်, ရှာတွေ့မှပင်ယနေ့တူးဖို့ချေး tools တွေကိုသုံးပြီးကျောက်မိုင်းအတွက်ဖြစ်လိမ့်မည်။
အလယ်ခေတ်မှာတော့သူတို့ Kozak Beacons မှမီးရှို့ကြ၏။ နောက်ပိုင်းတွင်ထောင်ပေါင်းများစွာကဒီမှာစခန်းများတွင်လူပေါင်းသိမ်းယူကြ၏။ တစ်နှစ်တာ 1901 အဆောက်အဦးတစ်ခုခုကို Romanesque Chapel ၏ထိပ်ပေါ်မှာလည်ပတ်ငွေကြေးကြောင့်ပန်းချီဆရာဇန်နဝါရီ Prousek အဆိုပြုထား။ စိရယျလျနှင့် Methodius, ဒါမှမဟုတ်ဒေသခံကျောက်မျက်ရတနာနားမှာစိုက်လျက် Slavic grotto ၏ 20 မီတာမြင့်သောတောင်ပို့ထက်ပို။ အဲဒီနေ့ကပြီးနောက်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း 28 ၌မီးရှို့ရ၏။ အောက်တိုဘာလမီးပုံ။ František Ladislav Rieger တစ်နှစ် 1903 ၏အသေခံတောင်ပို့ Rieger တည်ဆောက်ခြင်းအားဖြင့်သူ့မှတ်ဉာဏ်ကိုဂုဏ်ပြုတဲ့၏စိတ်ကူးပြီးနောက်။ တစ်နှစ်အကြာတွင်အောင်မြင်သောတစ်နိုင်ငံလုံးစုဆောင်းခြင်း "ဆောက်လုပ်ရေး Rieger များအတွက်သမဝါယမ mounds" စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ စားသောက်ဆိုင်နှင့် Riegrovo အောက်မေ့ဖွယ်နှင့်အတူခရီးသွားဧည့်တည်းခိုနှိုင်းယှဉ် tumulus သို့မဟုတ်ဂူဗိမာန်: သူတို့ကနောက်ပိုင်းမှာအတူတကွနှစ်ခုသဘောတရားများကိုဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်။ ဒုတိယအမူကွဲခကျြခရီးသွားကလပ်ကိုယူ။ အဆိုပါဖောင်ဒေးရှင်းသောကျောက်အိမ်တွင်း 29 အလောင်းတော်ထားခဲ့ပါတယ်။ သြဂုတ်လ 1926 ။ အဆိုပါ chalet ပတ်ဝန်းကျင်မြို့များမှအ collection များကို, အလှူငွေနှင့်ပံ့ပိုးမှုများကိုကနေတညျဆောကျခဲ့သညျ။ အခမ်းအနား 24 ဖွင့်လှစ်။ ဇွန်လ 1928 ။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းအိမ်တွင်းဂျာမန်နှင့်ချက်ကိုစလိုဗက်စစ်တပ်ပြီးနောက်ကသိမ်းပိုက်ခဲ့သည်။ ဖေဖော်ဝါရီလ 1948 အိမ်တွင်းပြီးနောက်ပြည်သူပိုင်ခဲ့ကုမ္ပဏီကိုစာဆိုင်များနှင့်စစ်သုံးအိုးခွက်လွှဲပြောင်းပေးအပ်။ မေလ 1964 ခုနှစ်တွင်အခန်းကိုမီးရှို့ကြ၏။ desolátnímပြည်နယ်အတွက် Semily ချက်တင်ထဲမှာခကျြခရီးသွားကလပ်၏ 1994 ပြည်နယ်ကနေဝယ်ယူခဲ့သည်။ 1995 တစ်နှစ်တစ်လေ့လာရေးကုန်းပတ် 40 မီတာနှင့်အတူ 24 မီတာအမြင့်နှင့်အတူထိပ်တန်းလေ့လာရေးမျှော်စင်မှာပွင့်လင်းဖြစ်ခဲ့သည်။ Lookout မျှော်စင်ကိုလည်းဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းရွက်တိုင်သတ္တုစစ်တပ်, ရဲနှင့်မီးသတ်သမားအဖြစ်ဆောင်ရွက်ပါသည်။ 2002 Kozákovကတည်းက PLA အခကျြပရဒိသု၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ တရားဝင်ပြန်ဖွင့်မယ့်ယေဘုယျအားပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးပြီးနောက် Rieger chalet ၏ 2003 ။ အဆိုပါမျှော်စင်ခကျြပရဒိသု၏အမြင်များ, Pojizeří, ခကျြအလယျပိုငျးတောင်တန်းကမ်းလှမ်း, ဧရာမတောင်တန်း နှင့် Lusatian တောင်တန်း, ရွှတ်, တောင်များ, တောင်တန်း, Broumovsko Highlands သို့, လင်းယုန်တောင်တောင်ခြေနှင့်ဖြစ်နိုင်သည်ကုန်း။
Příhrazské Nature Reserve ခရိုင်Mladá Boleslav အတွက်ရွာPříhrazy၏တောင်ဘက်နှင့်အနောက်ဘက်တွင်တည်ရှိပြီး, 1999 အတွက်ကြေငြာခဲ့သည် Rocks ။ အဆိုပါအကြောင်းပြချက်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဟာကျောက်ဆောင်များ၏အဓိကရှုပ်ထွေး, သဘာဝနှင့် Semi-ကသဘာဝသစ်တောအသိုင်းအဝိုင်း, geomorphological တန်ဖိုးရှိသောနယ်မြေဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါအရံတို့သည်သဲကျောက်ကုန်းပြင်မြင့်၏အစွန်းပေါ်ရော့ခ်မြို့ကြီးများ၏ရှုပ်ထွေးပြီးဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါကြီးစိုးအင်္ဂါရပ်Kobylíဦးခေါင်းအမည်ရှိကျောက်ဖွဲ့စည်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ကျောက်ကိုမြို့အတွင်းပိုင်းထွင်းထုဆုတောင်းပဌနာHynštaတွေ့ရှိရပါသည်။ 17 အတွက်။ ရာစုခကျြကညီအစ်ကိုတွေကခိုလှုံရာအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ အဆိုပါဒေသများတွင်ရဲတိုက် 13 ၏အကြွင်းအကျန်ရှိပါသည်။ ရာစု။
Příhrazské Highlands သို့Jičínskáတောင်ကုန်းအတွင်းVyskeřskouကုန်းအောက်မှာကျရောက်ပါတယ်။ အဆိုပါဧရိယာ၏အမြင့်ဆုံးအမှတ်ကို 463,5 မီတာတောင်ကုန်းအထီးဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ treeless ထိပ်သီးအစည်းအဝေး olivine nephelinite ချက်မှာမဟာကွင်း veins အရှေ့တောင်ဆီသို့ဦးတည်နာမယူဘဲထက်ဝက်ခန့်တစ်ဒီဂရီဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကသူတို့ရဲ့မူလအမြစ်ကနေသဲကျောက်လုပ်ကွက်နှင့်ရေအဆင့်ဆင့်၏စမ်း၏မျက်နှာပြင်၏အထွဋ်နှိုင်းယှဉ်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ အသက်အကြီးဆုံးပုံစံများဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံPříhrazské Highlands သို့ Ridge များမှာ - တစ်ဦးတည်ဆောက်ပုံပလက်ဖောင်းနေဆဲဖြစ်သည်။ 178 တာဝါတိုင်ရေတွက်Příhrazskéရော့ခ်မြို့ကျောက်ဆောင်။ သူတို့ထဲကအများစုဟာချက်မှာမဟာပြား၏ခေါင်းမှာအစွန်းချောက်ချိုင့်မှာကိုဆိုလိုတာပါ။ နဖူးစလစ်မျက်နှာပြင်များအလှည့်ခြင်းဖြင့်ခါးပတ်ဆလိုက် fringed ဖြစ်ပါတယ်။ အကြီးဆုံးအပြတ်အသတ်မကြာသေးမီကဇွန်လ 1926 အတွက်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ယင်း၏အကျိုးဆက်Olšinyရန်ကျေးရွာနှင့်ပျက်စီး Dneboh ခရိုင်လမ်း၏ကြီးမားသောအစိတ်အပိုင်းကိုဖျက်ဆီးပစ်ခဲ့သည်။
မြေပြိုမှု၏ရလဒ်အဖြစ်ကြားဖြတ်၏ဖွဲ့စည်းခြင်းလွယ်ကူချောမွေ့သောအကွဲအတွင်းအမျိုးအစားတိုးချဲ့တွင်း, kerného။ Příhrazskýchကျောက်ဆောင်ငါတို့သည်ခြောက်ဆယ်ဝန်းကျင်ကိုရှာပါ။ အကျော်ကြားဆုံး 22,5 မီတာအနက်တိုးချဲ့ကွဲနှင့်အတူကြားဖြတ်ကွာဟချက်ပါပဲ။ အရာ 1960 ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်နှင့်အဘယ်သူ၏အောက်ခြေနှစ်နှစ်အကြာတွင်ခရီးသွား Gustav Ginzel, Jizerka အတွက်ကျော်ကြားHnojovéhoအိမ်၏ပိုင်ရှင်ဆင်းသက်တော်မူခဲ့သည်။ အဆိုပါချောက်ချိုင့် Krtoli Wolf ကနှင့်မိုင်းရော့ခ်တံခါးရော့ခ်မုတ်ခြင်းနှင့်ဂူကိုဖြတ်ပြီးလာနိုင်ပါတယ်။ ထို့အပြင် Chods ရညျးအိုးအပေါ်ကိုခေါ် Krtoli ဂူ, အကြီးဆုံးလိုဏ်ဂူ Bohemian ပရဒိသု။ ဤသည် 40 မီတာရှည်လျားဂူပထမဦးဆုံး 80 အတွက်စူးစမ်းခဲ့သည်။ 19 နှစ်ပေါင်း။ ရာစုရှေးဟောင်းသုတေသနပညာရှင် Josef Ladislav forage ။
မကြာခဏškrapyနှင့်သံအင်းလေး grooved နေကြသည်။ အဲဒီမှာကျောက်, မှိုနှင့်တွေ့ဆုံရန်။ (s Cambisol arenická podsol arenickým) အက်ဆစ် arenosoly Rankers (ပုံမှန်နှင့်litickým) နှင့်သဲနှင့်အတူတစ်ဦးညိုပြည့်သောမြေဆီလွှာ (eutrophic Cambisol) ရှိပါတယ်ဖွဲ့စည်းသည်။ Waterlogging pseudogleys ကော် (ပုံမှန်အားဖြင့်တစ်ဦးorganozemním) နဲ့ရာထူး (ကအရွယ်အစားနဲ့ပုံမှန်) သိမ်းပိုက်သည့်အရံ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကိုလည်း sizing organozem ။
desktop ပေါ်မှာဘွတ်ကင်တွင်သဘာဝအလျောက်သစ်တောအသိုင်းအဝိုင်းတစ်ခုမြင့်မားတဲ့အချိုးအစားနှင့်အတူသစ်တောများကြီးစိုး။ ကနှစ်ရှည်ပင် (Lunaria rediviva) ကြီးထွားလာရှိရာအမျိုးသား၏အထွတ်အထိပ်ကိုအောက်တွင်ထင်းရှူးကျောက်တုံးများထိပ်ပေါ်တောအုပ်, ရှေးဟောင်းရဲတိုက်ထဲမှာ loess အပေါ် thermophilic ပိတ်ပင်သစ်သားလှီများနှင့်အပျက်အစီးများသစ်တော, သူတို့ထဲကတန်ဖိုးအရှိဆုံးအကြားအဆင့်။ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အချက်တစ်ဦးကျောက်တောင်ကုန်း Hrad ပေါ်ကျွန်းစတက်လွင်ပြင်အသီးအရွက်များအိုင်ဗင် Stipa (Stipa Joannis) ဖြစ်ပါသည်။ ဒါဟာ Bohemian ပရဒိသု၏ဤအပိုငျးတှငျအနောက်ဆုံးမြည် Thermophyticum တည်နေရာကိုကိုယ်စားပြုတယ်။ သူ့ကိုအပြင်, လေ့လာတွေ့ရှိပိုပြီးစိတ်ဝင်စားဖို့ thermophilic မျိုးစိတ်ရှိကြ၏။ Drábskéတွင်ကြီးထွားလာ cotoneaster (Cotoneaster integerrimus) světničky။ အဆိုပါပြောင်းပြန်ဉျကသဘာဝကျောက်ကိုနံရံများနှင့်အတူ Spruce admixture Beech နှင့်Vrančaထင်းရူး (Huperzia selago) နှင့် Lycopodium Annotinum (Lycopodium annotinum) ရပ်ကိုတွေ့နိုင်ပါသည်။ view ၏ရုက္ခဗေဒ point ကနေအကျော်ကြားဆုံးလညျခြောငျး Krtoli ဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါအရံအတွင်းတောင်ဘက်ရေကန်ဆွဲထားလူသား၏ Oak hangman မှာအောက်မေ့ဖွယ်သစ်ပင်ကိုတွေ့။
Hruboskalsko တစ်ဦးသဘောသဘာဝအရံကျော်ကြားတဲ့ 22 ဖြစ်ပါတယ်။ ဧပြီလ 1998 ။ ပြားချပ်ချပ် 219,2 ဟက်တာအတူ protected ရှုခင်းဧရိယာခကျြပရဒိသုအကြီးဆုံးရော့ခ်မြို့တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါအကြောင်းပြချက်ကာကွယ်မှုကိုကောင်းစွာထိန်းသိမ်းထား relict ထင်းရှူးနဲ့ကျယ်ပြန့်ရော့ခ်မြို့ဖြစ်၏။ Hruboskalskéရော့ခ်မြို့ 60 မီတာအထိများ၏အထွဋ်ရောက်ရှိရာကြောကျဖွ massifs နှင့်သီးခြားတာဝါတိုင်ရာပေါင်းများစွာ, ပါဝင်သည်။ နိမ့်ခုခံသဲကျောက်ကြောင့်နှင့်ကျောက်ဆောင်တစ်ခုအရေအတွက်ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောသက်ရောက်မှုပုံစံမျိုးစုံနှင့်ပုံစံများကို (Honeycomb, ပြတင်းပေါက်များ, တံခါး) ၏မျိုးစုံကြွယ်ဝဖြစ်ကြသည်။ Hruboskalsko အောက်တိုဘာလ 2005 အတွက်ဥရောပ Geoparks ကွန်ယက်များတွင်ထည့်သွင်းခဲ့သော Geopark ခကျြပရဒိသု၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
ဒါဟာအကျော်ကြားဆုံးတာဝါတိုင် bandleader, ဦးခေါင်းခွံ, မီးပြတိုက်နှင့်ကံကောင်းတို့ပါဝင်သည်, အများဆုံးမူရင်းခကျြတောင်တက်ဒေသများ၏တဦးတည်းဖြစ်၏။ ခကျြခကျြတောင်တက်များထဲတွင်အသင်းအဖွဲ့နှင့် Protected အခင်းအကျင်းဧရိယာခကျြပရဒိသု၏အုပ်ချုပ်ရေးသဲကျောက်ပေါ်တက်ပြီးများအတွက်အခြေအနေများပါဝင်သောသဘောတူညီချက်ဖြစ်ပါတယ်။
Hruboskalskéရော့ခ်မြို့မှာလည်းအရေးပါတဲ့ခရီးသွားဧရိယာဖြစ်ပါတယ်။ အကျော်ကြားဆုံးအထိမ်းအမှတများထဲတွင်တစ်ဦးကျောက်တောင် massif ပြီးသား 14 ပေါ်တွင်တည်ဆောက်ခဲ့သောရဲတိုက် Rough ရော့ခ်, ပါဝင်သည်။ ရာစုရဲတိုက် Wallenstein ။ အခြေခံမူမှာအလားအလာသည်ခြင်္သေ့မှာ, ထိုကဲ့သို့သော Marian အလားအလာ, တီးဝိုင်းများ၏အလားအလာအဖြစ်အများအပြားအပန်းဖြေသောနေရာများတည်ဆောက်ခြင်းနှင့်အခြားဧည့်သည်များအတွက်အထင်ကြီးကျောက်ဖွဲ့စည်းမှုကိုစောင့်ရှောက်မည်နှင့်အလွန်မကြာခဏzdolávajícíပတျဝနျးကငျြတာဝါတိုင် climbers နိုင်သောနေရာ။ Hruboskalsko ကယ်လစီယမ်အိုင်းယွန်းကြွယ်ဝပေါက်ကျေးဇူးတင်ပါသည် Sedmihorky spa ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။
Hruboskalsko သဘာဝအရံ3ကီလိုမီတာ Trutnov မြို့ကနေ Liberec ချက်ဒေသတွင်တည်ရှိသည်။ ဒါဟာကျေးရွာပေါင်း Sedmihorky, Rough ရော့ခ်နှင့် Kacanovy အကြားတည်ရှိသည်။ ဤနေရာတွင်အမြင့် 265-420 မီတာအကြားဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ protected ရှုခင်းဧရိယာခကျြပရဒိသုHruboskalskéရော့ခ်မြို့တော်ရဲ့အဖိုးတန်ဆုံးရော့ခ်မြို့။
ဖွဲ့စည်းခြင်းကျောက်ဖွဲ့စည်းမှုလေးအဆင့်သို့ခွဲခြားနိုင်ပါသည်။ ပထမဦးဆုံးခန္ဓာကိုယ်သဲကျောက်မြေပြင်အဆင့်အထိကိုအောက်တွင်တည်ရှိရသောအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်အဆင့်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါပျော့ပြောင်းပြီးသဲကျောက်ဝန်းရံထားတဲ့အားကောင်းသဲကျောက် cores ဖွဲ့စည်းခြင်းအတွက်ရရှိလာတဲ့မြေအောက်ရေ၏ရလဒ်အဖြစ်။ ဒီအဆင့်မှာတော့ရေဆောင်သောဒါကိုတော့အေးခဲနေသောကာလအတွင်းဖြစ်ပွားသည့်အဆုံးအဖြတ်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုရေခဲအသက်အရွယ်။ နောက်တစ်နေ့အဆင့်ချက်မှာမဟာမြင့်မားခြင်းနှင့်တိုက်စားမှုဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာကနဦးအဆင့်တွင်ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါရလဒ်သဲကျောက်ဉျနှင့်အတူဗဟိုဘိုဟီးမီးယား၏ပြားချပ်ချပ်စိုက်ပျိုးရေးရှုခင်းဖြစ်ပါတယ်။ တတိယအဆင့်တွင်ချက်မှာမဟာမြင့်မား၏အဆုံးပြီးနောက်ဖြစ်ပေါ်သောရင့်ကျက်အဆင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအဆင့်မှာအကာအကွယ်ပေးအပေါ်ယံလွှာပဲရာသီဥတုအမျိုးမျိုးကြောကျနံရံအနားအတိုင်းလိုက်နာထားတဲ့ကျိုး exfoliating အလွှာ, ဖြစ်ကြပြီး 1 မီတာအထိ၏အထူရှိနိုင်ပါသည်။ နောက်ဆုံးအဆင့်ကျောက်ဖွဲ့စည်းမှု၏ပျက်စီးခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့, ဇရာ၏အဆင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ပျက်စီးခြင်းအများဆုံးမကြာခဏရော့ခ်လုပ်ကွက်များနှင့်ခင်းအကာများရော့ခ်မြို့များပြိုလဲ, မြေပြိုမှုကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ ကျောက်ကိုမြို့တွင်ကျွန်တော်တို့ဟာမတူညီတဲ့အသက်အရွယ်မျက်နှာပြင်၏ mosaic အဖြစ်ရှုမြင်နိုင်ပါသည်။ ကျောက်ကိုမြို့အဖြစ်ဒေသတွင်း၌အခြားသူများနှစ်ပေါင်းသန်း 18-20 တီထွင်ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့သည်။
Hruboskalsko Highlands သို့Turnovskýတောင်ကုန်းပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့Vyskeřské Highlands သို့, ကပိုင်ဆိုင်သည်။ ဤအမြောက် Bohemian ပျဉ်ပြားရှိသမျှတို့ကိုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ Hruboskalsko Highlands သို့libuňskýmချိုးနှင့်မြစ်ချိုင့်၌တစ်ချိုးနဲ့မြစ်JordánkaŽehrovkaကာရံထားခြင်းခံရသည်သောချက်မှာမဟာကွင်းဖြစ်ပါသည်။ microforms Honeycomb, ရော့ခ်အထစ်, အခေါင်းပေါက်နှင့်ပြတင်းပေါက်များဟာဟိုလိုစင်းခေတ်ကိုဖန်တီးခဲ့ကြစဉ်ကျောက်အခြေခံ, အသက်ပျိုကာလကို Pleistocene အတွက်ဝေါဟာရဖြစ်ပါတယ်။ အများဆုံးဒီကဗျာ massifs မီးပြတိုက်, အုပ်စုတစု bandleader နှင့်နဂါးကျောက်ဆောင်။ ကျနော်တို့ဂူရော့ခ်တံခါးနှငျ့ဥမင်လိုဏ်ခေါင်း၏နံပါတ်တွေ့နိုင်ပါသည်။ Hruboskalskéရော့ခ်မြို့ကိုအားနည်းစွာlitifikovanýmiလင်းကျောက်သဲကျောက်များပါဝင်ပါသည်။ Power ကသဲကျောက် 120 အချို့ outcrops 60 မီတာအထိမြင့်မားပါတယ်။
နီးပါးကျောက်တစ်ခုလုံးကိုပိုင်နက်သစ်တောများ (97%) နဲ့ဖုံးလွှမ်းနေသည်။ ပုံမှန်ကောက်ပဲသီးနှံ, သို့သော်, အရပ်ရပ်သို့ကွဲပြားအများစုရော့ခ်တာဝါတိုင်ထိပ်ပေါ်တွင်သို့မဟုတ်အခွခေိုသာထိန်းသိမ်းထားရာထင်းရှူးတောအုပ်ဖြစ်ကြသည်။ သင်တို့သည်လည်းပေမယ့်ပိတ်ပင်တစ်နိမ့်အချိုးအစားနှင့်အတူထင်းရှူးနှင့်ပိတ်ပင်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ ကျောက်နောက်ထပ်ပုံမှန်အသီးအရွက်များ, ကျောက်အကြား damp မြစ်ကိုဖုံးလွှမ်းထားတဲ့အက်ဆစ် Beech သစ်တောများဖြစ်ကြသည်။
ဝိသေသမျိုးစိတ်ရှိချုံနွယ်ပိတ်အပင်အလွှာအထူးသဖြင့် bilberry အနီရောင် (Vaccinium myrtillus), Heather (Calluna vulgaris), အနီရောင် whortleberry (Rhodococcum vitis-idaea), Deschampsia flexuosa (Avenella flexuosa), bracken (Aquilegia vulgaris) နှင့် bika ဆံပင် (Luzola pilosa) ဖြစ်ပါသည် ။ damp မြစ်တို့သည်ခုနှစ်တွင်မကြာခဏကျနော်တို့သြစတြီးယားဖမ် (Dryopteris carthusiana) နှင့်ညာဘက်ဖမ် (Dryopteris dilatata) ကိုရှာပါ။ ပုံမှန်ကတော့ sedge ၏ရှေ့မှောက်တွင် (Carex) နှင့်ဘုံကျူပင် (Phragmites Australis) အထူးသဖြင့်အသေးစားသစ်တောကန်ပတ်လည်မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ စမ်းရေပေါက်မှာချိုင့်၌, စမ်းရေပေါက်တို့သည် protected စက်ရုံမျိုးစိတ်အကြီးဆုံး (Equisetum telmateia) ဖြင့်မကြာခဏ (Trichomanes speciosum) trichomanes ဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိသည်ဘုံ horsetail ဖြစ်ကြသည်။ အများဆုံးပြဿနာထိုးဖောက်မျိုးစိတ် relict ထင်းရှူးသစ်တောများများ၏ဂေဟစနစ်ကိုအန္တရာယ်ဖြစ်စေအံ့သောငှါအရှေ့အဖြူထင်းရှူး (Pinus srobus) ဖြစ်ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့သောအနီရောင်ပိတ်ပင် (Quercus rubra), ဥရောပ larch (Larix decidua) နှင့်ခမ်းနားထင်းရူးအဖြစ်ကိုစိုက်နှင့်အခြားအစာရှောင်ခြင်းတိုးတက်နေသောသစ်ပင်မျိုးစိတ် (Abies grandis) ရှိခဲ့သည်။
နှစ်ခုတွားသွား, (Anguis fragilis) အနှေးနှင့်မြွေ (Natrix natrix) နှင့်ရေနေနှစ်ခုမျိုးစိတ်ဘားပြုပ် (Bufo Bufo) နှင့်ဖား (Rana temporaria) ရှိပါသလား။ ရော့ခ်မြို့ nesting များနမူနာငှက်အဆင်သင့်အခြေအနေများဖန်တီးပေးပါတယ်။ ဒီတော့ဝေးရှိ 73 ငှက်မျိုးစိတ်တွေ့ရှိခဲ့ကြပြီး 62 မျိုးစိတ်ပင် nesting များနမူနာဖြစ်ကြသည်။  အပေါများဆုံးများထဲတွင် Kestrel (Falco tinnunculus), အ tawny ဇီးကွက် (Strix aluco), Chaffinch (Fringilla coelebs), redstart (Phoenicurus phoenicurus), Jay ပါဝင်သည် (Garrulus glandarius) goldfinch (Carduelis carduelis) magpie (pica pica), စာကလေး (လမ်း၌ရှောက် montanus) အစိမ်းရောင် woodpecker (Picus viridis), bellflower (Carduelis chloris) ။ အဆိုပါကာကွယ်စောင့်ရှောက်သောငှက်များများထဲတွင်ပျံ (Hirundo rustica) (Ficedula parva) pied အဖြစ်များသည့်ဆွစ်ဖ် (Apus apus) ဇီးကွက် (ဘင်ဘင်), Raven (Corvus corax) Jackdaw (Corvus monedula), ပါဝင်သည်။
တွေ့ရှိခဲ့ 14 နို့တိုက်သတ္တဝါများရှိခဲ့သည် - တဟာရှ (Mele Mele) ဥရောပမှဲ့ (Talpa europaea), ထင်းရှူး marten (Mart Mart), ထင်းရှူး marten (Mart foina), ရှိ fox (Vulpes vulpes), mouflon (Ovis musimon), အဝါရောင်လည်ပင်း mouse ကို (Apodemus flavicollis), ဘဏ် vole (Clethrionomys glareolus), တောဝက် (Sus scrofa), shrew (Sorex araneus), သမင်ဒရယ် (capreolus capreolus), ရှဉ့် (Sciurus vulgaris), ယုန် (Lepus europaeus) နှင့်အငယျဆုံးသောမြင်းခွာလင်းနို့ ( ပြင်းထန်စွာမျိုးသုဉ်းရန်အန္တရာယ်ရှိဖြစ်သော Rhinolophus hipposideros) ။ ၎င်း၏လူဦးရေ 150-300 တစ်ဦးချင်းစီပါဝင်သည်။ ဒေသတွင်း၌အများဆုံးဖြစ်ပေါ်ကျောရိုး crosshead temnostní (Meta menardi) Cicindela campestris (Cicindela campestris) ammophila sabulosa (ammophila sabulosa) ပုရွက်ဆိတ်ခြင်္သေ့သည်သာမန် (Myrmeleon formicarius), ပိုးထင်းရှူး (Spondylis buprestoides) သိုးသငယ်ကို dazule (Acanthocinus aedilis) တို့ပါဝင်သည် ။ ရံဖန်ရံခါကလိပ်ပြာကတ္တီပါနီကျားကိုက်တတ်သောပိုးကောင် (Callimofpha dominula) ရှိပါတယ်။
အဆိုပါအကြောင်းပြချက်ကာကွယ်မှု relict ထင်းရှူးနှင့်အတူခကျြပရဒိသုအတွင်းအရေးအပါဆုံးရော့ခ်မြို့ဖြစ်၏။ အတော်ကြာ protected အပင်နှင့်တိရိစ္ဆာန်မျိုးစိတ်လည်းရှိပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, အပင်များပေါများ trichomanes (Trichomanes speciosum) နှင့်ပြင်းထန်စွာမျိုးသုဉ်းရန်အန္တရာယ်ရှိတိရိစ္ဆာန်များမြင်းခွာလင်းနို့ (Rhinolophus hipposideros) ဖြစ်ပါသည်။ ဒါကသဘာဝအရံ PLA အခကျြပရဒိသု၏အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်သော Protected အခင်းအကျင်းဧရိယာခကျြပရဒိသု၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဧရိယာပြုစုစောင့်ရှောက်မှု PR စနစ် Hruboskalsko ၏အစီအစဉ်အတွက်ပြဌာန်းထားသည်။ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှု၏အကြီးမားဆုံးပြဿနာများအနက်ကျောက်တို့မှအသီးအရွက်များချွတ်ပြီး Off-လမ်းမြေပြင်အနေအထား depressing နှင့်ကြိုးတက်ပြီးကျောက်ဆောင်ကြိတ်ပါဝင်သည်။
Hruboskalsko Nature Reserve ဟာအလွန်လူစည်ကားဧရိယာဖြစ်ပါတယ်။ တောင်တက်အပြင်ကိုလည်းဘုံတောင်တက်ခြင်းနှင့်စက်ဘီးစီးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဧည့်သည်ကျောက်၏အထင်ကြီးအမြင်များ, ဒါပေမယ့်လည်းထူးခြားတဲ့သဘောသဘာသာမကဆွဲဆောင်လျက်ရှိသည်။ တောင်တက်ခြင်းနှင့် biker အဘို့များစွာသောလမ်းကြောင်းမှတ်သားနေကြသည်။ စိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးခရီးသွားဧည့်အစက်အပြောက်အနက်ကနဂါးကျောက်ဆောင်များနှင့်အပျက်အစီးများပေါ်တွင်ခကျြပရဒိသုအလှဆုံးအမြင်များတစ်ခုဖြစ်သည်ရှိရာရဲတိုက်ရော့ခ်စုစုပေါင်းအနီး Marian အလားအလာများပါဝင်သည်။ အဆိုပါကြွက် Hole ဟုခေါ်တွင်ခြောက်ဆယ်ငါးမီတာရှည်လျားကျောက်တောင်စင်္ကြံနှင့်အတူရဲတိုက်ရော့ခ်စုစုပေါင်းနက်ရှိုင်းသောချောက်အောက်တွင်။ စိတ်ဝင်စားစရာမှာသဘာဝမြင်ကွင်းများများထဲတွင်ရုက္ခဗေဒဥယျာဥ် Bukovina နှင့်ရော့ခ်ဖွဲ့စည်းရေးမာရျနတျရဲ့လက်ပါဝင်သည်။ တစ်ဦးအလယ်ခေတ်ရဲတိုက်တစ်ဦးရှေးဟောင်းသုတေသန site နှင့်အကြွင်းအကျန်ရှိသေး၏။ အခြားအရေးကြီးသည့်ယဉ်ကျေးမှုက်ဘ်ဆိုက်များ Hruboskalsko Valdšteinရဲတိုက်, နန်းတော်စုစုပေါင်းကျောက်, ရိုးရာဗိသုကာKopitcůvလယ်ယာနှင့် spa Sedmihorky ပါဝင်သည်။ ထိုဒေသတွင် multi-ရက်ကြာခရီးစဉ်သည်ဒေသခံတည်းခိုခန်းတွင်သို့မဟုတ်တစ်ဦးကောင်းတဲ့စခန်း Sedmihorky အတွက်နေရာထိုင်ခင်းအဘို့ options အမျိုးမျိုးသုံးစွဲဖို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
Hruboskalskéရော့ခ်မြို့တော်ကိုအများဆုံးမူရင်းတောင်တက်ဒေသများ၏တဦးတည်းဖြစ်၏။ အသင်းဖော်များနှင့် Bausys Náhlovskýmနှင့်အတူချားလ်စ်Čábelkaသယ်ဆောင်ပေးသောခကျြ 1928 ဒါမှမဟုတ်မျှော်စင်အတွက်ပထမဦးဆုံးတစ်ကိုယ်တော်တက်ရှိတယ်ဖန်ဆင်းခဲ့သည်။ အဲဒီအခြိနျမှာသဲကျောက်ပေါ်တက်ပြီးတောင်ပေါ်ကောင်းတစ်ဦးပြင်ဆင်မှုအဖြစ်ယူဆခဲ့သည်။ သိသိသာသာခကျြသဲကျောက်တောင်တက်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနှင့်အခြားတောင်တက်သမားတစ်မော်ဒယ်ဖြစ်လာ Hruboskalsko Joska အစက်အပြောက်ပုန်းအောင်းအတွက်စစ်ပွဲအတွင်း။ စစ်ပွဲပြီးနောက် Hruboskalsko ခကျြသဲကျောက်တောင်တက်၏ဗဟိုဖြစ်လာသည်။ ချက်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံအတွက်တက်ပြီးစိတ်ဝင်စားပြည်ပမှာရွေ့လျားများ၏ဖြစ်နိုင်ခြေဖွင့်လှစ်ခဲ့သောနှစ်တွင် 1989 ပြီးနောက်သိသိသာသာလျော့နည်းသွားပေမယ့်ယခုနောက်တဖန်မြင့်တက်။ မူလကဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းချွေးတပ်စခန်းသေဆုံးခဲ့သူကိုတောင်တက်သမားတစ်ဦးအောက်မေ့ဖွယ်ဖန်တီးရန်စိတ်ကူးနှင့်အတူတည်ဆောက်ခဲ့သည့်သင်္ကေတသင်္ချိုင်း၏ Hruboskalsko ရော့ခ်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု။ နောက်ဆုံးမှာတော့သူကတောင်ပေါ်မှာပျောက်ပျက်တဲ့သူနဲ့အခြားတောင်တက်သမားတစ်ဦးအထိမ်းအမှတ်အဆောက်အဦးဖြစ်လာခဲ့သည်။
Trosky (ထိုမြေပုံပေါ်တွင်ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက် 514 မီတာ, အရပ် 488 အစီရင်ခံသည်) ရဲတိုက်နှင့်အတူ neovolcanic တောင်ကုန်း Trosky လည်းခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်လည်ပတ်ငွေကြေးကြောင့်နှင့် Jicin အကြား PLA အခကျြပရဒိသု, ခရိုင် Troskovice Semily Liberec ချက်ဒေသတွင်း၌ cadastral မြို့တော်စည်ပင်ကအပေါ်ကိုခေါ့်ဝှက်ချက်များကိုပျက်စီးစေဖြစ်ကြသည်။ အပျက်အစီးတစ် Bohemian ပရဒိသု၏သင်္ကေတနှင့်ချက်သမ္မတနိုင်ငံအတွက်အများဆုံးသွားရောက်လည်ပတ်ရဲတိုက်၏တဝတည်းဖြစ်ကြ၏။ တောင်ပေါ်၏အထက်ပိုင်းအတွက်ကာကွယ်ထားသောသဘာဝအထိန်းအမှတ်အဆောက်အအုံအပျက်အယွင်းဖြစ်ပါတယ်။ peak အမြင့်ဆုံးအမှတ်ကိုVyskeřské Highlands သို့ဖြစ်ပါတယ်။
Slag တိုက်စားမှု relict scoria ကန်တော့ချွန်ကိုကိုယ်စားပြုသည်။ ရွေးချယ်တိုက်စားမှု pyroclastics ၏အမြောက်အများကို ယူ. ချွတ်ထောက်ပံ့ရေးအမွှာကျစ်လစ်သိပ်သည်း basanites (basalt အမျိုးအစား) ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့သည်ယခင် monogenic မီးတောင်ကိုခြေရာခံ။ နှစ်ခုတာဝါတိုင်အကြား space ကိုဆဲဖြစ်ပါတယ် subhorizontally သိမ်းဆည်းထားပန်းကန်ခန္ဓာကိုယ်ကိုမှောကျ columnar ပူးတွဲ oriented ဖြစ်ပါတယ်bazanitovéတည်ရှိ။ ဒီဂိမ်းဖြစ်ကောင်းကလေးယိုဖိတ်သည့်ချော်ရည်စီးဆင်းမှုတစ် relict ကိုယ်စားပြုတယ်။ ကျစ်လစ်သိပ်သည်းထောက်ပံ့ရေးလမ်းကြောင်းကိုလည်း pyroclastic သိုက်၏ရှေးဟောင်းပစ္စည်းနှင့်အတူစီတန်းနေကြသည်။ Layering ဖွံ့ဖြိုးပြီးပေမယ့်သိုက်ရဲ့ texture က slag တစ်ကန်တော့ချွန်၏ပုံစံအတွက် slag မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်အပ်နှံကြောင်းရှင်းပါတယ်မပေးပါ။ အကွဲကွဲအပြားပြားနဲ့ Strombolian အမျိုးအစားမီးတောင်ပေါက်ကွဲမှုနှင့်အတူ vesicular အပိုင်းအစများ၏ကြိမ်နှုန်း၏ဒီဂရီ။ ယင်းအပျက်အစီး၏ Basanites နှစ်ပေါင်းသန်း 16,5 မှရက်စွဲပါခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါလှုပ်ရှားမှုသှနျးလောငျးချော်ရည်လိုက်ပါသွား, scoria ကန်တော့ချွန် Baba ဖွဲ့စည်းစတင်ခဲ့သည်။ ၎င်းနောက်ပိုင်းတွင်လှုပ်ရှားမှု၏ဗဟို၏ရွှေ့ပြောင်းခံရအနည်းငယ်အရှေ့ဘက်, အစ်မဗာဂျင်းကန်တော့ချွန်မြင့်တက်ပေးခြင်း။ အဆိုပါထောက်ပံ့ရေးလမ်းကြောင်းကိုကန်တော့ချွန်ကလေးနှင့်ဤချော်ရည် slag ဗာဂျင်းထပ်နှင့်ဆက်စပ်ဗာဂျင်း relict ချော်ရည်စီးစိမ့်ဝင်သွားတယ်။ Activity ကိုပုံပင်ထပ်မံသူမသည်လေးဆယ် 20 သက်သေအနားမှာရပ်လျက်ရှိရာအရှေ့, သို့ပြောင်းရွှေ့ထို့နောက်ဖြစ်ခဲ့သည်။ တူးဖော်ခဲ့bazanitováရာစုထူးခြားတဲ့ရော့ခ်။ ခွဲဖြာ soupouchu ပြားပေါ်ပေါက်နှစ်ဦးကရော့ခ်တာဝါတိုင် anthropogenic လှုပ်ရှားမှုများအပြင်လုပ်ပါတယ်ခဲ့ကြသည်နှင်းခဲရာသီဥတုဒါဏ်periglaciálním: နှင်းခဲကမ်းပါး, ကျောက် columnar ခွဲခြာထောက်ပံ့ကြေးအတွက်ဒါကိုတော့။ တောင်ခြေတောင်စောင်းမှာ marlite soliflukčníအပျက်အစီးများဝတ်လုံကိုဖြစ်ခဲ့သည်။ (- တောင်ဘက်-အရှေ့တောင်ဘက်အပေါ် Apolena သဘာဝအရံရော့ခ်မြို့) မတ်စောက်သောတောင်စောင်းပေါ်တွင်ရပ်တည်ရန်ကြီးမားသောသဲကျောက်ကျောက်ဖွဲ့စည်းမှုရှိပါသည်။ အဆိုပါတောင်ကုန်းများအားဖြင့်ထင်းရှူးနှင့်အတူတောသည် Spruce နှင့် Beech သစ်တောများပါဝင်သည်။
Prachovskéကျောက်, အနောက်မြောက်ဘက် Jicin, သဘာဝအရံ၏ PLA အခကျြပရဒိသုနှင့်လူကြိုက်များခရီးသွားဧည့်ဦးတည်ရာ၏အစိတ်အပိုင်းကီလိုမီတာ5မှ7အကြောင်းကိုန့အမျိုးမျိုးသောပုံသဏ္ဍာန်ရှိသောကျောက်အုပ်စုသည်သဲကျောက်ဖွဲ့စည်းမှုဖြစ်ကြသည်။ သူတို့ဟာပင်လယ်၏အစွန်းပေါ်မှာအနည်အနှစ်များအဖြစ်မီဆိုဇိုးရစ်ခေတ်ဖွဲ့စည်းခဲ့ကြသည်။
လူများတို့သည်ကျောက်ခေတ်ကတည်းကသမိုင်းမခေတ်ကတည်းကဒီနေရာမှာနေထိုင်ခဲ့ကြောင်းရှေးဟောင်းသုတေသနအထောက်အထားရှိပါတယ်။ မြေတပြင်လုံးဧရိယာကုန်းဖြည့်ဆည်းအချို့သောအရပ်တွင်, Slavic အမျိုးအနွယ်၏သဘာဝကျောက်ကိုခံတပ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ အတွင်းပိုင်းကိုပထမဦးဆုံးအခြေချ၏ဖန်တီးမှုကိုမြင်တော်မူ၏။
ဖြစ်ကောင်း 13 ရဲ့အဆုံးမှာ။ ရာစုတစ်ခုကပ်လျက်Velišskýmအိမ်ခြံမြေနှင့်အတူ basalt Velis ရဲတိုက်၏အထူးများ၏တဦးတည်းဖြစ်ခဲ့သည်။ တစ်ဦးကဆယ်စုနှစ်အနည်းငယ်အကြာတွင်အိမ်ခြံမြေပိုင်သောမြေသို့ရရှိသွားတဲ့နှင့် Vartemberk created အမျိုးမျိုးသောအခြေချနေထိုင်မှု, အဆုံး 15 ဖြစ်ကြသည်။ ပိုင်ရှင်များအဖြစ်ရာစု Lipa ၏Trčkovéအဖြစ်ကိုးကားထားပါသည်။ 17 ရဲ့အစမှာ။ ရာစုSmiřičtíSmiřicသိမ်းယူ, ဒါပေမယ့် 1625 Wallenstein အတွက်အိမ်ခြံမြေကျော် ယူ. သူ၏Frýdlant duchy ကပူးတွဲ။ စစ်ပွဲပြီးနောက်ကျောက်ဆောင်များတွင်အိမ်ခြံမြေ, ပျောက်ကွယ်သွားခြင်းနှင့်အခြေချနေထိုင်နှောင့်အယှက်ခဲ့ကြသည်။
အသစ်ဇာတ်စင်အဆိုပါအိမ်ခြံမြေဧကရာဇ် Sigismund အားဖြင့် nobility မှရာထူးတိုးခဲ့သူအနောက်တိုင်းဘိုဟီးမီးယားအတွက်ပစ္စည်းဥစ္စာနဲ့ခရိုင်မိသားစုŠlik၏ဗိုလ်မှူးကြီးဟင်နရီ Slik ချီးမြှင့်ခံခဲ့ရသည့်အခါ 1637 အတွက်စတင်ခဲ့သည်။ လှံတံŠliks 1948 အတွက်ပြည်သူပိုင်သည်အထိအိမ်ခြံမြေပိုင်ဆိုင်သည်။
ကျောက်အနီးတစ်နှစ် 1866 လျော့နည်းမြောက်မြားစွာ Prussian အနိုင်ရခဲ့ပေမယ့်အရာ Austro-Prussian စစ်ပွဲ၏တိုက်ပွဲတဦးကိုငါမြင်၏။
19 ၏အဆုံးအားဖြင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ရာစုရော့ခ်တောင်တက်သမားနှင့်ခရီးသွားဧည့်များအတွက်ဦးတည်ရာဖြစ်လာခဲ့သည်။ 1933 အတွက်ပြည်နယ်သဘာဝအရံဖြစ်လာခဲ့သည်။
အဆိုပါလျော်တရားစွဲဆိုမှုŠliksမိသားစုထဲမှာနောက်ကျောကဒီမှာ 1993 ဧရိယာ၌ဝယ်ယူနှင့်ခရီးသွားလုပ်ငန်းနှင့်ဆက်စပ်သောန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ဖို့စတင်ခဲ့တယ်။ ပြည်သူ့တက်ရောက်သူတစ်နှစ်လောက် 300 000 ကလူမှာခန့်မှန်းထားသည်။
ကျောက်တပြင်လုံးကိုရှုပ်ထွေး၏ပထမဦးဆုံးမှတ်တမ်းတင်ယခုနှစ် 1874 အတွက်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ Jičínသဒ္ဒါကျောင်းမှသံလိုက်အိမ်မြှောင်ကိုသုံးပြီးပါမောက္ခအန်တိုနီ Zefyrin Maloch နှင့်အသေးစိတ်မြေပုံကိုဖန်တီးနင်းသည်။ သူ့အလုပ်၏ရလဒ်မှာပြီးစီးခဲ့ဘယ်တော့မှခဲ့အသေးစိတ်မြေပုံကိုဖြစ်သင့်သည်။ ပထမဦးဆုံးလမ်းကြောင်းများနှင့်အဓိကကျောက်ဖွဲ့စည်းမှုဖြန့်ချိသည်သူ၏အစီအစဉ်ကိုမြေပုံPrachovskéကျောက်ဆောင်နှင့်အညီလည်းတစ်နှစ် 1879 အိမ်နောက်ဖေးကျောင်းသားများကိုမှတ်သားခဲ့ကြသည်။
အခုဆိုရင်ခရီးသွားဧည့်သုံးခရီးစဉ်ကိုဖန်ဆင်းရှိပါတယ်။ အဆိုပါခရီးသွားဧည့်ရာသီ 1 ထံမှကြာရှည်ခံသည်။ အောက်တိုဘာလနှောင်းပိုင်းမှဧပြီ။ ကျောက်ဖို့ Access ကိုတရားစွဲဆိုတာဖြစ်ပါတယ်။ တောင်တက်သမားသို့သော်သူတို့က CHS သို့မဟုတ် UIAA အဖွဲ့ဝင်များဖြစ်ရပါမည်, တစ်ဦးလျှော့စျေးနှုန်းတစ်ခုဖြတ်သန်းဝယ်ယူရန်အခွင့်အလမ်းများနှင့်အမှတ်အသားပြုထားလမ်းကြောင်းကိုပိတ်ထားကောင်းစွာရွှေ့နိုင်ပါတယ်။ ကျောက်အချိန်တွင်နောက်ဆုံးပြင်ဆင်ခဲ့သည်အမျိုးမျိုးအမည်ရှိအလားအလာများစွာရှိပါသည်။ Pelíšekတည်ရှိသောသဘာဝကရေကူးကန်နှင့်အတူကျောက်တောင်ဧရိယာကြားထဲက။
ငုတ် Castle - ရဲတိုက်ရော့ခ်။
Previous post တောင်များ
next ကိုဆောင်းပါး သံလွင်တောင်ပေါ်မှာ